Banyere Anyị - Zhejiang Anan Lighting Co., Ltd.
Usoro Fluorescent Tube
Onye na-eme njem nlegharị nke anwụrụ ọkụ
Bọmbụ gbawara agbawa Gosiri tube
Agba abịa Tube
Ikanam tube Series
Ikanam Glass tube
Ikanam Nano tube
Ikanam PC + AL tube
Ikanam 8FT / 2.4M tube
Ikanam Glass + PITA Nkiri tube
Ikanam Water Gosiri tub
Ikanam Yi tube
Ikanam Smart tube
UV tub usoro
Ikanam anwụnta egbu egbu tube
Anwụnta na-egbu tube
Ikanam BLB tube
Ikanam Osisi Too tube
Anụmanụ Na-eto eto Tube
Omenala UVC Germicidal Tube
Ọkụ oriọna na-eto eto
UVC Germicidal Oriọna
Creatmepụta akụ na ụba maka ndị ahịa, ịmepụta ikpo okwu maka ndị ọrụ, ịmepụta uru maka ụlọ ọrụ ahụ, na-eme ka ọha mmadụ nwee ọganihu.
Ahịa ụwa, ọtụtụ narị afọ Anan
Ọrụ priselọ Ọrụ
Tomebe obi ụtọ Ann n'ụlọ, ka ezinụlọ ọ bụla na-eji ịmụmụ ọnụ ọchị na ndụ arụ ọrụ kwa ụbọchị
Anyị na-elekwasị anya n'ịchọta na oriọna na-acha n'ọkụ na ụlọ ọrụ ọkụ, ma hazie ọtụtụ mmemme nke ọkụ na ahịa iji dozie nsogbu ndị ahịa na-aga nke ọma, ma merie otuto nke ọtụtụ ndị ahịa. Anyị na ngwaahịa na-exported karịa mba 50 na mpaghara, dị ka Europe, South na North America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, South Africa, na Middle East, wdg Ma ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu ọkụ ngwaahịa mbupụ ụlọ ọrụ.
ANY spirit mmụọ nke "ndị ahịa mbụ" dị ka ebumnuche azụmahịa, Na-agbaso teknụzụ ọhụrụ, usoro ọhụụ, usoro nhazi usoro, yana site na asambodo njikwa ISO9001. Kemgbe ọtụtụ afọ, ngwaahịa ndị a na-enyocha ma gosipụta mba, mpaghara Ọdịmma na Nka na ụzụ, n'usoro ụkpụrụ mba. Ezie na ngwaahịa na-gafere CQC, OA, RoHS, PSE, TUV na ndị ọzọ na mba àgwà asambodo, na-enweta 15 nchọpụta Kemịkalụ.
Banyere ọkụ ọkụ
Zhejiang Anan Lighting Co., Ltd. e guzobere na 1999, nke a maara n'oge gara aga dị ka Ebe Ọwụwa Anyanwụ Tubewa nke mepere anya, bụ ụlọ ọrụ nke ọkụ ọkụ ọkụ ogologo nke setịpụrụ nyocha, mmepe, mmepụta na ahịa dị ka otu ụlọ ọrụ anyị na-ekpuchi 23 mu na ebe obibi dị. ruo mita 10000. Ihe bụ ihe ọzọ, n'ihi na nke osisi nke Jiangxi, Anhui, Fujian na Zhejiang, okporo ụzọ bụ adaba nke mere na ọ chọrọ naanị banyere 6 awa Ningbo ọdụ ụgbọ mmiri na banyere 7 awa Shanghai ọdụ ụgbọ mmiri.
Aka Ọrụ Ala
N’okpuru nduzi nke Onye isi ala anyị, Mr. Xu haibo, anyị na-etolite ma na-agbaso "nkà ihe ọmụma ndị mmadụ", na-azụlite ọdịbendị ụlọ ọrụ pụtara ìhè, na ndị ezinụlọ anyị niile na-agụ Ti Tzu Kui kwa ụtụtụ iji jiri nlezianya na -emepụta ụlọ ọrụ ndị na-emekọrịta ihe, eziokwu, asọmpi.
Anyị na-enye 24 awa ONLINE ọrụ
Isi ngwaahịa nwere fluorescent tube, ogologo-ogologo tube, agba kenha tube, osisi na anụmanụ na-eto eto tube, ahụhụ na-egbu tube, BLB tube, Bọmbụ gbawara agbawa na-àmà tube, Eke na n'ime agba tube na Dugara tube. Ngwa ndị a gụnyere gụnyere ọkụ ọkụ ọkụ, Ebe a na-adọba ụgbọala, ebe a na-ere ahịa, ụlọ ọrụ akwa, ịkọ ahịhịa na anụmanụ, ụlọ nri, ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ akụ, ebe a na-ere mmanụ, ebe a na-egwupụta kol, na nkebi na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ.
Adreesị:Nke 6, Yuansan Road, Kaihua Industrial Park, KaiHua City, Zhejiang Province, China